Kurume dombo rekuzvarwa - Aquamarine - bloodstone - Nyowani yekuvandudza 2021
Tria Rose uye ropastone Ndiwo mabwe maviri ekuzvara eruvara rweKurume. Imwe inomutsa matenga ebhuruu ruvara uye inodzikamisa mvura nepo imwe inomiririra hutano uye simba.
Zvinorevei kuti dombo rekuzvarwa raKurume?
Dombo rekuzvarwa idombo rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waMarch: Tria Rose uye ropastone
Chii chinonzi Kurume dombo rekuzvarwa?
Ko dombo rekuzvarwa raKurume rinowanikwa kupi?
Ndekupi kwekuwana March dombo rekuzvarwa?
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zveMarch matombo ekuberekwa?
Tria Rose, dombo rekuzvarwa raKurume, rinomutsa mavara egungwa. Kubva pakadzika-bhuruu-bhuruu kusvika muchiedza, zvishoma greenish bhuruu. Ichi chishongo chinozivikanwa nechitarisiko chayo chakajeka uye nepop yemavara yainopa.
Bloodstone, dombo rekuzvarwa raKurume, ibwe rakasvibira-rakasviba rakapenya nemavara matsvuku akajeka esimbi oxide. Kazhinji inowanikwa yakamisikidzwa mumatombo kana mumabhedha erwizi sematombo, anonyanya kupihwa ibwe iri iIndia, Brazil neAustralia.
Tria Rose, dombo rekuzvarwa raKurume, rine rakapfuma ruvara uye rakagara riri chiratidzo chehudiki, hutano uye tariro. Ruvara rwayo rwunoshambadza runotangira pane kuchena kusvika pakadzika bhuruu uye zviyeuchidzo zvegungwa.
The ropastone dombo rekuzvarwa rinowanzo kusviba-girini cabochon ine tsvuku mavara e-iron oxide, iro "ropa" rinounza hutano uye simba kune iye akaripfeka.
Tria Rose matombo ekuberekwa anocherwa muKenya, Madagascar, Nigeria, Zambia neMozambique, pamwe nekumwe nzvimbo muAfrica. USA, Vietnam uye zvakare Cambodia
Izvo zvekutanga mari ye ropastone dombo rekuzvarwa rinocherwa muAustralia, Brazil neIndia uye zvinowanzoonekwa sematombo mumakomba erwizi kana akasunganidzwa mumatombo
Zvishongo zvekuzvarwa zvakagadzirwa ne Tria Rose uye ropastone. Isu tinotengesa Kurume wedombo mabwe ekushongedza mhete, zvishongo, mhete, mitsipa nezvimwe.
Pane zvakanaka Tria Rose uye ropastone iri kutengeswa muchitoro chedu
Tria Rose, dombo rekuzvarwa raMarch zvishongo, rinogadzira runyoro rwakanaka kumatombo uye zhizha mawadhiropu. Aquamarine inoburitsa kuchena kwemvura yekristaro, uye kufadza uye kutandara kwegungwa. Iko kudzikamisa, kunyevenutsa, uye kuchenesa, uye kunokurudzira chokwadi, kuvimba uye kurega kuchienda. Mumatare ekare, Tria Rose yaitendwa kuti ndiyo pfuma yezvinhu zvinofadza, uye yaishandiswa nevafambisi vengarava sedumwa rerombo rakanaka, kusatya uye kudzivirirwa. Izvo zvaionekwawo sedombo rekusingaperi hudiki uye mufaro. Nhasi inodzivirira vese vanofamba nepano, kana kupfuura, kana pedyo nemvura, uye ichivhura makwara ekutaurirana kwakajeka uye kunobva pamoyo.
Dombo rekushinga, kunatsa, uye nekuzvipira kwakanaka, iyo ropastone ine nhoroondo refu yekushandiswa kweayo ekurapa zvivakwa. Chaionekwa sedombo remashiripiti nekuda kwekugona kwayo kushandura simba risina kunaka uye kuchenesa nzvimbo uku uchidzivirira panguva imwe chete. Munyika dzekare, dombo reropa raifungidzirwa kuti ndiro rakanakisa kupfuura maJaspers, dombo rakadzika, rakasvibira repasi rakasimbiswa nemavara erudzi rutsvuku. Inodaidzwa kuti Dombo reZuva, uye gare gare Dombo raKristu, simba rayo rinotakura kuchena kweropa uye nenzira inonzwisisika rinotaura nezve hupenyu nekuzvarwa, kusimba nesimba, kushushikana uye kushinga. Senge tembere zvese zvakavanzika uye zvemashiripiti, uye hunhu hwayo hunodzivirira nekusimudzira.
Pisces uye maAries matombo ese ari maviri Jan dombo rekuzvarwa
Chero iwe uri Pisces uye maAries. Tria Rose uye ropastone ndiro dombo kubva munaKurume 1 kusvika 31.
March 1 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 2 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 3 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 4 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 5 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 6 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 7 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 8 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 9 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 10 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 11 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 12 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 13 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 14 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 15 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 16 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 17 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 18 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 19 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 20 Pisces Tria Rose uye ropastone
March 21 Aries Tria Rose uye ropastone
March 22 Aries Tria Rose uye ropastone
March 23 Aries Tria Rose uye ropastone
March 24 Aries Tria Rose uye ropastone
March 25 Aries Tria Rose uye ropastone
March 26 Aries Tria Rose uye ropastone
March 27 Aries Tria Rose uye ropastone
March 28 Aries Tria Rose uye ropastone
March 29 Aries Tria Rose uye ropastone
March 30 Aries Tria Rose uye ropastone
March 31 Aries Tria Rose uye ropastone
Natural March dombo rekuzvarwa riri kutengeswa mune yedu dombo rekutengesa
Isu tinogadzira tsika yakagadzirwa munaKurume mabwe ekuberekwa sezvindori zvekubatanidza, mitsipa, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.